Akụkọ - Ihe 5 Ngwunye Ngwaahịa / Organic Ngwaahịa Gị Kwesịrị Ime
Nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa gị bụ mmekọrịta mbụ mmekọrịta nke onye zụrụ ahịa na akara gị. Kedu ka ị ga - esi mara ma ọ na - enwe mmetụta dị ukwuu? N'okpuru ebe a bụ ihe 5 ngwaahịa gị / ngwaahịa ị ga-emerịrị ka ọ dị ukwuu, ọ bụghị naanị mma.
1. Chebe ngwaahịa gị ka ọ ghara ibibi ya na mmetọ.
Ọnụ ọgụgụ otu ihe nkwakọ ngwaahịa maka ngwaahịa ọ bụla na-enye nchebe site na ịnye ihe mgbochi n'etiti ngwaahịa na ihe ndị na-emerụ n'èzí. Nke a dị mkpa karịsịa maka ngwaahịa ndị na-adịkarị mfe ịnweta oxidation yana ngwaahịa ndị a machibidoro iji 'nweere onwe ha' nke ihe ụfọdụ maka nfụkasị ma ọ bụ ahụike. Manọgide na-enwe iguzosi ike n'ezi ihe ngwaahịa site na nkwakọ ngwaahịa ihe mgbochi aghọwo ihe dị mkpa dị ka ụdị ngwaahịa ndị a na-enwetawanye ụba.
2. Eme ka ngwaahịa adị ndụ.
N'ihe banyere ngwaahịa ndị sitere n'okike na ahịhịa na-anaghị enwe ihe nchekwa, nkwakọ ngwaahịa ga-arụ ọrụ abụọ: Ọ bụghị naanị ịhapụ ndị na-emetọ gburugburu ebe obibi na ngwugwu kama ọ ga-echekwa ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'ime ngwugwu ahụ. Ngwaahịa dị iche iche chọrọ nkọwa dịgasị iche iche maka gburugburu ebe obibi iji bulie ndụ nchekwa. Nhọrọ dị taa na nkwakọ ngwaahịa nke na-enye ụlọ ọrụ ohere ịmepụta ma jigide gburugburu gburugburu n'ime ngwugwu ha iji bulie ndụ ngwaahịa.
3. Nyefee ika gị na ozi gị.
Ewezuga ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị, nkwakọ ngwaahịa ga-anọchikwa akara gị, ozi gị, ụkpụrụ gị na akụkọ gị n'ụzọ ziri ezi. Formatsdị nkwakọ ngwaahịa nke na-enye ebe kachasị maka eserese na azụmaahịa na-arụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya ha, na mgbe ụfọdụ dị ka onye na-ere ahịa ha.
4. Nye mma maka onye njedebe.
Ndị ahịa nke oge a bụ maka ngwaahịa dị mma nke na-akwado ma na-eme ka ụdị ọrụ ha siri ike. Ha na-achọ ngwaahịa na nkwakọ ngwaahịa nke na-agbanwe, ọkụ, obere, ma na-enye nhọrọ dị mma dịka akwa akwa na mgbapụta mkpọchi.
5. Kwado kacha mmepụta arụmọrụ.
You na-emebi ọtụtụ ngwaahịa n'ihi ngwugwu ngwugwu na-ezighi ezi ma ọ bụ akara mkpuchi ezighi ezi / leaky? O siri ike ịmalite ngwa ngwa ngwa ngwa mgbe ị nwetara nnukwu iwu? You na-esiri gị ike ịkọ n'ụzọ ziri ezi ma kenye ihe mmepụta ihe? Ndị ahịa gị enweghị oge ichere maka ndaghachi azụ, ọ gaghị anabata nkwakọ ngwaahịa mebiri emebi. Yabụ họrọ ụdị ngwugwu nke na - edozi ọgwụ aesthetics na nrụpụta ọrụ.
6. Emeghe paịl maka Win
Mgbanwe nguzo na-agbanwe agbanwe na-enye ihe niile dị n’elu na ndị ọzọ. Packagingdị nkwakọ ngwaahịa a na-adọrọ mmasị na-enye:
Ojiji nke ihe ndi na-adigide na gburugburu obibi
Ngwungwu nke choro ihe di obere ka imeputa, chekwaa na ibupu
Akwa akwaaji maka ahia, na-enye echiche nke ngwaahịa dị elu, nke oge a
Ihe ngwugwu nke na-adighi aka, na-eme dika akwukwo nke ya
Onye njedebe njedebe dị mma dị ka zipa na akwa akwa
Nchedo kachasị nke ngwaahịa gị / ngwaahịa maka ezigbo ndụ
Nhọrọ nhọrọ ngwa ngwa ngwa ngwa
Rotary Jupụta na Akara Na Linear Scales maka Granules
Adabara obodo ihe onwunwe, dị ka Melon mkpụrụ, akụ, swiiti, mịrị, suger, nnu, Kọfị agwa, kuki, crystal monosodium glutamate na ndị ọzọ siri ike ihe akpaka mbukota.
Akpa akpa akpa, nke a makwaara dị ka Doypacks, na-akpaghasị ọtụtụ ọrụ, site na ofe na nri nri na kọfị na ihe ọ beụ beụ. Oge eruola iji tụlee ihe ụdị usoro nkwakọ ngwaahịa a nwere ike ime maka ngwaahịa, mmepụta, na akara ala gị. Mụtakwuo maka igwe iji tinye ngwugwu premade na Gaoge